Amasayithi we-Czech Online Casino | Amakhasino e-inthanethi Amakhasino e-inthanethi
Ukugembula i-urbi eCzech Republic
Ukugembula kusemthethweni eCzech Republic, futhi lokhu kusebenza kuzo zonke izinhlobo zokugembula. AmaCzech anganaki kakhulu, mhlawumbe lokhu kuchaza ubukhona bamakhasino cishe kuwo wonke amadolobha. Kusobala ukuthi ngenxa yalokhu ukugembula kusezingeni eliphakeme futhi kuletha inzuzo enkulu ezweni. Enhlokodolobha yaseCzech, iPrague, isebenzisa amakhasino angaba yishumi nambili. Phakathi kwe-Atrium Hilton ehlonishwa kakhulu, iNxusa uHenry.
NgoMeyi 2016 iSenate yaseCzech yamukela izikweletu eziningana, ngokusho kwemakethe yezemidlalo yasekhaya eyavulelwa izinkampani zomhlaba wonke. Ngokuqondene nedatha kaJanuwari 2017, ukuthi njengenyanga yokuqala, kunamakhasino angaphezu kwekhulu, kufaka phakathi izindawo zokugembula nemigoqo. Ezindaweni zokudlela ezinhle, ezinkantini nakwezinye izindawo ezinjengalezo, ungathola futhi imishini eyahlukene nemishini yokubeka. Emshinini ngamunye wokudlala eCzech Republic akhawunti yabantu ababalelwa ku-100.
Ukugembula oku-inthanethi e-Czech Republic
Siyabona enkombeni yethu yezokugembula eku-inthanethi ukuthi ukugembula online, kanye nomhlaba, eCzech Republic kusemthethweni. Kusukela ngomhlaka-1 Januwari 2017 izwe laqala ukusebenza umthetho omusha ogembula imidlalo eku-inthanethi iCzech Republic. Ngokusho kwakhe, ilayisense manje selingathola hhayi kuphela abaqhubi bezokugembula bendawo, kodwa nozakwabo abavela e-European Union nase-European Economic Area. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ngokwethulwa kwezichibiyelo, uMnyango Wezezimali waseCzech Republic unamandla onke okuvimba zonke izizinda ezingekho emthethweni. Phakathi kwezinye izinto, umthetho wokugembula okuku-inthanethi kwabasebenza ukugembula futhi usetha amanani entela.
Kubikwe ukuthi abaqhubi bokuqala bezindawo zokugembula online eCzech Republic, banikezwe ilayisense ngo-2008 kwakunguSAZKA, Synot Tip, Chance, Tipsport neFortuna. Lesi sakamuva sinaso inethiwekhi yezingosi zokubheja eziku-inthanethi kulo mdlalo. Ngasikhathi sinye, uFortune uqhuba ilotho, futhi ngisho nokubheja ngocingo eCzech Republic, ePoland, eSlovakia naseCroatia.
Uhlu lwe-10 ephezulu ye-Czech Online ye-Casino Sites
I-Casino Bohemia, i-casino ethandwa kakhulu eCzech
Imboni yokugembula eCzech Republic ithuthukiswe kahle kakhulu. Kuleli, njengezwe elikhulu kangaka, izikhungo zokugembula amashumi. EPrague kuphela, kunamakhasino angaphezu kwayishumi. Abaholi babo ngu-Atrium Hilton Savarin, iNxusa noHenry (amakhasino, anamagama amaningi).
ICasino "Atrium" iyihhotela lezinkanyezi ezi-5 "iHilton". Le yindlu yokudlala enkulu kunazo zonke ePrague, enikela ngemidlalo ehloniphekile ngaphezu kwamanani amaningi. Insizakalo kule khasino Czech Republic isezingeni elihle impela, futhi isikhungo uqobo sinomklamo omuhle. Ngaphandle kokuhlala ekhasino nasezindaweni zokungcebeleka, ukunakwa kwamakhasimende ukunikela ngendawo yokudlela, ibha, idamu lokubhukuda, iklabhu yezempilo nezinye izindawo zokungcebeleka.
Inxusa leCasino lisenkabeni yePrague eWenceslas Square ehhotela elinegama elifanayo. Amaklayenti amakhulu alesi sikhungo izivakashi ezivela emhlabeni wonke.
I-Savarin - ikhasino Czech Republic ePrague , ithathwa njengenye yekhasino endala futhi ehlonishwayo. Itholakala eNa Prikope esakhiweni esinomlando ngesitayela seBaroque, esakhiwa ekuqaleni kuka-1745. Ngaphakathi kwekhasino lihlaba umxhwele ngobukhazikhazi balo futhi lenza lincome lesi sakhiwo. Uma ukubukeka kwalesi sikhungo sokugembula kushaya "izinsuku zakudala", okokusebenza okusetshenzisiwe kubuyela eqinisweni lezivakashi zekhasino nezwe lanamuhla. Lapha ungadlala le midlalo yekhasino efana ne-American roulette, pontoon, poker (Seven, poker card ezintathu ne-Oasis) nemishini ye-slot. Wonke amakhasino amaklayenti anikela ngeziphuzo zamahhala endaweni yokuphuza nokuphumula. Imali yamukelwa kusakhiwo semidlalo - i-euro ne-Czech koruna. Ukungena ekhasino kukhululekile futhi akuqukethe izidingo zokubukeka kwezivakashi.
Okunye ikhasino ethandwayo Czech Republic
UHenry casino eWenceslas Square, obizwa nge-Alex noma enye iYalta, ubonakala ngesilinganiso esikhulu kunazo zonke phakathi kwamanye amakhasino eCzech Republic, kodwa futhi unedumela elihle kakhulu maqondana nezikhungo zobuqotho. Ngokwamahemuhemu, ukukopela ekhasino kuyinto ejwayelekile. lapha akekho ongamangali ama-croupiers amaningi ayizakhamizi zaseRussia le ndawo iyathandeka ngokuthi ulimi lwesiRussia lwabadlali abavela eRussia.
Singasho ukuthi wonke amakhasino asebenzayo ePrague atholakala enkabeni yedolobha. Ngakho-ke, uma ufisa ukuthola indawo efanelekayo yomdlalo ngeke kube nzima kunoma yimuphi umdlali, futhi ngize ngifike kuqala enhlokodolobha yaseCzech.
Abaningi imidlalo ethandwa kumakhasino amakhadi ama-Czech: iBlackjack nePoker . I-roulette etholakalayo, amalotho. Ngokuqondene nemishini yama-slot, ayibonwa kuphela kuzikhungo zokugembula zezwe, kepha nasezindaweni zayo zokudlela nezindawo zokudlela.
Amakhasino ajwayelekile akuzona izivakashi kuphela kodwa futhi nezindawo. Ngokwezibalo, amaCzechs ashiye ezikhungweni zemali zokugembula ephindwe kane ngaphezulu kwabaseMelika. Kusuka kubavakashi abadlali abaphezulu kakhulu abavela eRussia naseChina.
Mayelana nokwephulwa kwekhasino, ngokusho kwedatha yonyaka odlule, lezo zitholwe engxenyeni yesithathu yazo zonke izikhungo zokugembula. Okunye ukwephula umthetho kunqunyelwe kumakhamera ezokuphepha angaqopheki kahle, izivakashi ezinobufakazi obanele namathokheni. Isibonelo, umsebenzi wamahhovisi ekhasino amaningi eCzech Republic wawufihliwe ezinhlakeni zokuhlola. Kwezinye izimo, kuphawulwe ukuvikelwa kwemisebenzi okubuthakathaka ezikhungweni.
Ngokuqondene nekhasino Czech Republic kwamanye amadolobha ayo, kungashiwo indawo yokugembula "Grand" eBrno (idolobha lesibili ngobukhulu ezweni), ukuqala ngosuku lwe-13-00 bese kuvalwa ngo-4-00 ekuseni. Okokuzijabulisa kune-roulette, ama-craps nemishini yama-slot.
Isikhungo sokugembula esidumile "777" eTeplice (lapho kutholakala khona imidlalo yamakhadi, i-roulette nokunye ukuzijabulisa) nakwenye ikhasino Czech Republic.
Ukugembula eCzech Republic
I-saga yethu yamakhasino amahle kakhulu eYurophu iyaqhubeka. ICasinoToplists ikumema kwesinye sezikhungo ezinkulu zokuvakasha emhlabeni - inhlokodolobha yaseCzech, iPrague.
ICzech Republic - umbono omfushane womlando wejografi;
Amakhasino asekelwe ezweni manje avunyelwe;
Amakhasino asekelwe emhlabathini kanye nochungechunge lwe-intanethi ku-Prague European Poker Tour ne-World Poker Tour;
I-Prague ezikhangayo namaqiniso athakazelisayo.
Saya eBelarus, futhi ngaphambi kwalokho sasise-Estonia, eLatvia, eLithuania nasePoland.
Mhlawumbe, sathola i-dessert, kwelinye lamadolobha athandwa kakhulu eYurophu nasemhlabeni - ePrague. ICzech Republic idumile hhayi ubhiya kuphela, ukudla okungabizi kakhulu lapha, amasiko acebile okupheka namasiko, insizakalo enhle kakhulu… namakhasino ahlukile ngokwehlukile.
IPrague, iCzech Republic: Inhloko-dolobha yoMbuso Ongcwele WaseRoma
Ukukhulunywa okokuqala kwePrague kuya ekhulwini le-VI BC. e., nezingxabano ngemvelaphi yegama ledolobha azimile kuze kube namuhla. Omunye uthi ukukhokhelwa kwaqanjwa ngegama elithi "umkhawulo" noma "umfula", kepha lokhu kungukucabanga kuphela.
Ngokuvamile, iPrague ayisebenzi eMpumalanga Yurophu, lesi yisikhungo sangempela, kepha kulokhu akubalulekile kangako. Okubalulekile ukuthi iPrague amakhulu eminyaka ibiyisikhungo sendawo. ICity ivakashele inhlokodolobha yoMbuso Ongcwele WaseRoma, iBohemia, iCzechoslovakia.
Iphinde ithuthukise ngenkuthalo isiko nesayensi. Ekupheleni kwekhulu le-16 kwakuhlala ePrague isazi sezinkanyezi saseDenmark, isazi sezinkanyezi nesazi samakhemikhali U-Tycho Brahe.
Eqinisweni, inhloko-dolobha yaseCzech Republic iphakathi kwamadolobha amathathu avakashelwa kakhulu eYurophu. Iphambi kwaleyo yaseParis kodwa iLondon.
Ukugembula akuvinjelwe eCzech Republic. Inani ePrague lingaphezu kwamakhasino ayi-10 - isiyonke imishini engama-230 slot namatafula wokudlala ayi-130.
Izindlu zokugembula zitholakala ezingxenyeni ezahlukene zedolobha, okungcono kakhulu - eduze nendawo noma isikhungo. Imodi yokusebenza ecishe ifane - kusihlwa cishe futhi kuze kube sekuseni, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto.
Ngokungafani nezinye izingqungquthela zaseMpumalanga Yurophu ePrague empeleni iyindawo ethandwayo yabadlali bazo zonke izigaxa.
Iphatha izigaba zochungechunge olukhulu lwe-poker - yi-European Poker Tour kanye Umhlaba I-Poker Tour. Ngonyaka ngamunye, ngoDisemba, ePrague yaqhuba umkhosi omkhulu we-poker, oheha abadlali be-poker abadume kakhulu kanye nokugembula.
I-EPT, ngokuvamile "isivakashi" ku Hilton Prague , okuyinto ikhasino enhle kakhulu I-Artrium ; futhi i-WPT ivame ukukhetha enye ikhasino - Ikhadi leCasino Prague , enye indawo eyaziwa kuyo bonke abadlali.
Kuzo zonke izikhungo ezinkulu zasePrague inayo yonke imidlalo yekhasino ethandwa kakhulu - i-blackjack, imishini ye-slot, i-roulette, i-poker, njll. isevisi ezingeni eliphakeme, nokuhlobisa amahholo okugembula afanele imibukiso yemnyuziyamu.
Izinto zokuqala kuqala, uma unesifiso sokunambitha injabulo yeklasi lokuqala, kuyadingeka ukuya I-Wenceslas Square . Kukhona amakhasino amaningi asekelwe kakhulu - isibonelo Palas I-Savarin kanye ne-Banco . Zombili zihle kakhulu, kodwa, okokuqala kubonakala ukungabi khona kwekhodi yokugqoka kanye nentengo yokungena, ngakho-ke kulungele izivakashi eziningi.
Izindawo ezikhangayo ePrague
I-1.Stary Town neCharles Bridge: akukho okuheha izivakashi, njengokwakhiwa okuhle kwePrague. Ingxenye yomlando wedolobha efakwe kuhlu lwe-UNESCO Heritage Heritage.
Izakhiwo zenziwa ngezinye izikhathi ngezitayela ezihluke kakhulu, kodwa lolu hlobo lokuxuba futhi ludala iphunga eliyingqayizivele ePrague.
Inhloko-dolobha yaseCzech kunezibhuloho eziningi ezithakazelisayo (idolobha limi emfuleni uVltava), okuyinto ethandwa kakhulu yilokho, yiqiniso, yiyona Charles Bridge. Lesi sakhiwo esiyingqayizivele esingamakhilomitha ubude nobude be-9.5 wamamitha, sivulekile kuphela kubahamba ngezinyawo futhi sihlotshiswe ngezithombe eziyishumi nambili namaqembu ezithombe.
Hamba ebhulohweni - ingxenye ephoqelekile yohlelo lwamasiko lwanoma yisiphi isivakashi.
I-2. I-Prague Castle: kubhekwa njengenqaba enkulu kunazo zonke emhlabeni, i-analog yaseRussia ye- "Kremlin".
ICastle iqhelelene kancane ukusuka maphakathi nendawo, ibude obubabazekayo ngaphezu kwedolobha. Kungakhathalekile ukuthi izinhloso zohambo lwakho oluya ePrague yindawo efanele ukuvakashelwa kwasekuqaleni. Nakhu okunye ukukhanga okuyisihluthulelo - I-Cathedral yaseSt. Vitus.
I-3. Josefov: ingxenye ebalulekile yomlando womuzi, sekuyisikhathi eside kubhekwa njengendawo yokuhlala yamaJuda.
Ingqungquthela yayingakaziwa nje kuphela ngesakhiwo sayo, kodwa futhi ngoba lapha kwazalwa umlobi omkhulu Franz Kafka.
Amaqiniso nge-Czech Republic
Abantu: Izigidi ezingu-10.5.
Currency: I-Czech koruna.
Indlela yokuya ePrague: Inhlokodolobha yaseCzech - idolobha lithandwa kakhulu; lapha kusungulwe izindiza eziqondile ezivela emadolobheni amakhulu aseRussia, kufaka phakathi iSamara neYekaterinburg. Ezitimeleni, futhi, azikho izinkinga.
I-Czech Republic ebalazweni laseYurophu
E-Czech Republic kukhona isizwe esinokugembula kakhulu, yingakho ukugembula kuleli zwe akuvunyelwe futhi kusezingeni eliphezulu ngokwanele. I-Casino e-Czech Republic imelelwe ngokoqobo kuwo wonke amadolobha, kodwa ngaphezu kwakho konke ikhiwa ePrague. Kukhona cishe abayishumi kubo lapha. Amakhasino asePrague ahloniphekile yizona zakhiwo ezifana ne-Atrium-Hilton, i-Ambassador no-Henry.
Ikhasino i "Atrium-Hilton" itholakala maphakathi nedolobha esakhiweni sehhotela esinegama lomhlaba wonke - "Hilton". Ngokwendawo yisikhungo esikhulu kunazo zonke ePrague. Ngaphezu kohlobo olukhulu lwemidlalo, izivakashi ze-Atrium zizokwazi ukusizakala ngamanani amaningi. Futhi le khasino yaziwa ngezinga eliphezulu lenkonzo. Ngaphezu kwehholo lekhasino elihlukile, ukusungulwa kufaka i-sauna, ichibi lokubhukuda, ibha, iklabhu yokuzivocavoca kanye nezitolo zezikhumbuzo.
Enhliziyweni yedolobha elinomlando eWenceslas Square kunekhasino elaziwayo elibizwa nge- “Ambassador”. Itholakala ehhotela enegama elifanayo. ICasino eCzech Republic yenzelwe ukuthi izivakashi zayo zizoba, ikakhulukazi, izivakashi. Ngakho-ke, insizakalo yenziwa ngezilimi eziningana.
Elinye lamakhasino amadala kakhulu eCzech Republic yisikhungo esibizwa nge- "Savarin". Ingatholakala kuPrikope Street. Le khasino kunzima ukungayiboni, ngoba itholakala esakhiweni esiwuphawu lwePrague. Lesi sakhiwo sakhiwa ngo-1745 futhi saba isibonelo sokuqala sesitayela seBaroque. Interior "Savarina" ihlukaniswa ne-chic yombuso. Ekupheleni kwayo kusetshenziswa igolide nesiliva. Kulesi khasino, izivakashi zingadlala i-roulette yaseMelika, i-poker, i-pontoon, njll. Futhi kunenani elikhulu lemishini ye-slot. Kuyaphawuleka ukuthi ukungena ku- "Savarin" akubizwa imali ehlukile. Ngaphezu kwalokho, indawo yokudlela iphatha izivakashi ukuthi zikhulule ama-cocktails neziphuzo. Ukubheja kwamukelwa ngama-euro nakuma-Czech korunas.
0.1 Ukugembula oku-inthanethi e-Czech Republic
0.2 Uhlu lwe-10 ephezulu ye-Czech Online ye-Casino Sites
3 I-Casino Bohemia, i-casino ethandwa kakhulu eCzech
3.0.1 Okunye ikhasino ethandwayo Czech Republic
4 Ukugembula eCzech Republic
4.0.1 IPrague, iCzech Republic: Inhloko-dolobha yoMbuso Ongcwele WaseRoma
4.1 I-Casino ePrague
4.1.1 Izindawo ezikhangayo ePrague
4.1.2 Amaqiniso nge-Czech Republic
4.1.3 I-Czech Republic ebalazweni laseYurophu
I-2020 ayinamakhodi ebhonasi ediphozithi ekhasino lendlela eyakha amakhasino